စပါးအသင်းက အရမ်းကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး – နဗီးလ် – Miracle Times
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နဗီးလ်ကတော့ စပါးအသင်းအနေနဲ့ အခုလို ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်မှာ ဦးဆောင်နေတာက အသင်းအနေနဲ့သိပ်ကောင်းလို့ မဟုတ်ပဲ ပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ မန်ယူတို့ ခြေချော်နေလို့သာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စပါးတိုက်စစ်မှာ ကစားသမားကောင်းတွေပေါများနေတာကလည်း (ကိန်း ၊ ဆွန် ၊ ကူလူဆက်စကီ ) အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလာပါတယ်။
“ စပါးအသင်းက သိပ်ပြီးကောင်းတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နဲနဲချင်းတော့တိုးတက်နေတာကတော့အမှန်ပါ။ အာဆင်နယ်အသင်းတောက်လျှောက်ကောင်းနေတာကိုဖယ်လိုက်ရင် သူတို့က အရှိန်အမြန်ဆုံးပါပဲ .. အခု အာဆင်နယ်အသင်းလဲအမှတ်တွေစပြီးဆုံးရှုံးနေပြီ .. ယူနိုက်တက်ကလဲ သိတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်လား .. ဒီတော့ သူတို့ပိုရှေ့ရောက်လာတာပေါ့ . ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့အရမ်းကောင်းနေတယ်လို့ မထင်ပါဘူး ..
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနဲငယ်လောက်ကပဲ ကွန်တီက ပြောခဲ့တာမဟုတ်လား .. သူ လာမယ့်နွေရာသီမှာ အင်အားဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး .. ခင်ဗျားမမေ့ဘူးဆိုရင် ဇန်နဝါရီတုန်းက ကစားသမား ၂ ယောက်သူခေါ်ခဲ့သေးတာပဲ … ဒါက ဘယ်လောက်တာသွားသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာလည်း အာဆင်နယ်က အဆင့် ၄ ရမယ် . ယူနိုက်တက်က ရမယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတုန်းပါပဲ .. ကွန်တီက သန်း ၁၀၀ – ၁၅၀ လောက်လိုနေတာဗျ ..
အာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ကတော့ ဘယ်တုန်းကမှမယုံဘူးလို့ ကျွန်တော် အမြဲပြောခဲ့ပြီးသားပါ .. အကြောင်းပြချက်ကတော့ သူတို့သက်သေပြရဦးမယ်ဗျာ .. အဆင့် ၄ နဲ့ညီမျှတဲ့အရာကို ပြသရမယ်။ ကျွန်တော့်အထင် စပါးအသင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနဲငယ်အတွင်း ချန်ပီံယံလိဂ်နဲ့ညီမျှတဲ့အဆင့်အတန်းကို ပြသထားနိုင်သလို အတွေ့အကြုံလဲရှိပြီးသားပါ။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ တော်တင်ဟမ်တို့က ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ တွေးချင်တွေးနေမှာပါ .. ဒါလဲမမှားပါဘူး။ သူတို့မှာသိပ်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားစရာပွဲတွေတော့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် “ ဆိုပြီးပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ ပွဲစဥ်ပြီးဆုံးဖို့ ၇ ပွဲခန့်သာလိုတော့ပေမယ့် ချန်ပီယံဆုအတွက်ရော ၊ ဥရောပဝင်ခွင့်အတွက်ပါ အဖြေမပေါ်သေးပါဘူး။
Arsenal, England Players, Football, Football News, Manchester United